Isixazululo sePlatinamu: Ikhono Lening page + I-Club of Ukwabelana Izinkampani
Ukunikezwa kweWebhu okusebenzayo kakhulu okuke kwabonwa
Isixazululo I-PLATINUM I-GetWeb yiyona ephelele futhi ecebile kakhulu ebangeni lemikhiqizo eyenziwe ngawethu Ukuqalisa for the Ukubonakala yimuphi Izinkampani. Kuyinhlanganisela ephumelela kakhulu emibili izinsiza zewebhu ezikhethekile iphothifoliyo yethu okuhloswe ngayo ukuthuthukisa kanye ukubonakala yezinkampani:
la Ikhasi lokufika kanye nokubhaliselwe kokukhethekile kwethu Club di Ukuhlanganyela Izinkampani.
Ikhasi Lethu Lokufikisa + I-Club yethu ukuphinda oxhumana nabo kathathu
Una Ikhasi lokufika kungokoqobo I-MINI-SITE Qedela wonke amathuluzi zabahleli e Multimedia ejwayelekile yewebhusayithi. Esethu Ikhasi lokufika yakhelwe ukwethula okwakho kangcono Inkampani, Imikhiqizo kanye Nemisebenzi yakho kepha ngaphezu kwakho konke, yenziwe kahle kuzo zonke izici, okuqukethwe kanye nemultimedia, ukuze ibekwe ku Izinjini Zokucinga Eziyinhloko, -Google ngokuyinhloko.
Izici zekhasi lokufika
Imenyu yokuzula eyenziwe lula:
lokhu kwe ukwandisa ukunakwa yesivakashi, ngenkathi upheqa, futhi kulula ukuxhumana. Ingqondo yomuntu ithatha isinqumo ngemizuzwana, ngakho-ke iziphazamiso ezimbalwa esizinikezayo, maningi amathuba okuthi isivakashi sizokwenza isenzo esifunayo.
Ukhonkolo futhi ngokushesha:
sizoqinisekisa ukuthi i-Landing yakho iqukethe imishwana Isiphetho ed izenzo Kucacile ukuze isivakashi sikwenze.
Futhi i Ukucaca e Design, okwenziwe ngamehlo nokwenziwe kwafanela ukufaniswa nengqikithi yenkampani, umkhiqizo noma isevisi, kubalulekile; ngakho-ke ngokubukeka ikhasi lizozwakala futhi libe mnandi ekuzuleni.
sizonikeza ngokuqukethwe okuhambisana nosesho nezintshisekelo ezivezwe isivakashi sakho. Sizonothisa futhi siqedele okuqukethwe yikhasi lakho lokufika, ukuze sithathe ifayela le- 100% ukunakwa kwekhasimende elingaba khona.
Isizinda sakho sangokwezifiso
Njalo Ikhasi lokufika o "Ikhasi lokufaka", iyona yangempela iwebhusayithi i-multimedia ephelele, eklanyelwe futhi ehlelwe ngendlela yokuthi ihehe izivakashi futhi ibaguqule ekuxhumaneni nakumakhasimende angahle abe nawo. Ngaphezu kwalokho, ikhasi lethu lokufikelwa lijabulela izinzuzo ezikhethekile njenge Isizinda esizimele nesenziwe ngeziqu.
Ngokuyisisekelo uzoba ne iwebhusayithi yangempela ubuhle futhi bunakekelwe kuwo wonke amaphuzu, okuzoba mnandi ukuwavakashela futhi kube lula kakhulu ukulisebenzisa.
Amathuluzi athuthukile we
Njengengxenye ebalulekile yokunikezwa kwakho Platinum futhi uzoba:
la mail electronics ngekheli elenzelwe umuntu uqobo;
il Isipele nsukuzakho Landing ikhasi ukuvikela konke okuqukethwe;
ukuvikeleka okuqinisekisiwe ngokumelene nemizamo yokuphazamisa, ukuqhekeza nokuhlasela ngamagciwane;
il Isitifiketi I-SSL, a umthetho wokuphepha yakhelwe ukuvumela izinhlelo zokusebenza ukudlulisa imininingwane ngokuphepha nangokuphepha.
Ama-Protagonists abonga kwi-Sharing Force
Okwethu Club kukhethekile nokwabelana ngomphakathi digital ugxile izinkampani e ochwepheshe. Ukusebenza kwayo kufana kakhulu nenethiwekhi yokuxhumana nabantu lapho ithole khona zonke izici eziwusizo kakhulu nezisebenza kahle.
Ithuluzi eliyigugu le ukugcinwa yamakhasimende ngoba, ngenxa yokuhlanganiswa komphakathi kwangempela Ukwabelana Komphakathi, ikuvumela ukuthi wabelane ngendlela engenamkhawulo: isithombe, ividiyo, kukhangisiwe, Isigqebhezana, ukucaphuna e amaphromoshini. Ngaleyo ndlela uzoba nawo wonke amathuluzi wokugcina ukuxhumana njalo nenethiwekhi yakho. Futhi ungahlela imizamo futhi wabelane ngayo ngesikhathi sangempela nawo wonke umuntu.
Ukwabelana è ukwabelana futhi ilapho ukwabelana umqondo wokuwina ngemuva kwe Club I-TrovaWeb.
Kwakho Ikhasi lokufika ifundwe ngokukhethekile futhi yakhelwe ukuthuthukisa izihloko ezithile ngendlela ehehayo nenhle ngobuhle. Kepha kunokunye.
Zonke ziphathwa izici zemibhalo, kwesakhiwo, multimedia e ochwepheshe ngokuhambisana nazo zonke izindlela ezidingekayo zokuqinisekisa ukubekwa online on Injini yokusesha. Lezi zindlela zaziwa ngokuthi SEO, Search injini, futhi ziyahlonishwa ngokubabazeka ukuqinisekisa ukuthi Ikhasi Lakho Lokufakwayo limakwe kahle yi -Google futhi uthole isikhundla esihle. Ngamunye wethu Ikhasi lokufika kukhombisa okuqukethwe okwenzelwe imiqondo, igama eliyisihluthulelo noma amaqoqo wamagama asemqoka, afundwe futhi enziwe ngcono ngochwepheshe be-SEO abazokwazi ukuyitshela indaba yakho ngendlela eyiyo inkampani ukuheha ukunaka kwe izinjini zokucinga.
Ilungele Imikhankaso Yakho Yomphakathi
La Isixazululo sePlatinamu ikunikeza enye inzuzo emangalisayo. Akube khona Ikhasi lokufika ukuthi i Club eqinisweni, zenzelwe ukukuvumela ukuthi uqale Imikhankaso yenhlalo e Ukuxhaswa.
Ngakho-ke ungafinyelela ngokushesha nangempumelelo izinkulungwane zoxhumana nabo, futhi nokunquma izigaba ofuna ukufinyelela kuzo. The Imikhankaso yenhlalo zingakwazi, eqinisweni, ukuthi zisethelwe njengokuthandayo
IPlatinamu - Isixazululo esisodwa
Ukuvuselelwa kusuka ngonyaka olandelayo € 149,00 VAT KUFakiwe
€ 1.249,00 VAT kufakiwe